Isikhathi Sokubukeza Kwakho Ukuphela Konyaka | Martech Zone
Isikhathi Sokubukeza Kwakho Ukuphela Konyaka
NgoLwesithathu, uDisemba 9, 2009 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Sekuyisikhathi sonyaka futhi… lapho wena kumele beka isikhathi eceleni ukuze ubuyekeze uhlelo lwakho lokukhangisa lonyaka. Unyaka olandelayo ungahle ubaluleke kakhulu kunanoma yimuphi unyaka owedlule ngokwamukelwa ngokushesha kwamaqhinga ezinkundla zokuxhumana. Nakhu engikuncomayo ukukuqoqa:
Ukusetshenziswa Kwezentengiso ngeMedium - lena yimali yangempela ekhokhelwe imizamo yokukhangisa yangaphandle neyokukhangisa. Ukwephula lokhu ngaphakathi kwezigaba kubalulekile futhi. Ngamanye amagama, ungamane ubhale 'okuku-inthanethi'… yehla ungene kwi-web site, ukumaketha kwezinjini zokusesha, imithombo yezokuxhumana, njll.
Marketing Resources Kusetshenziswe Okumaphakathi - lokhu kuyizindleko zemithombo yangaphakathi emandleni abantu kanye nempahla nemishini. Futhi, qiniseka ukuthi wephula okulingene ngakunye kuye enanini eliphansi kunawo wonke.
Ukutholwa Kwamakhasimende noma Ukuthengiswa Komkhiqizo nge-Medium - lokhu kubalwa kanye nenani lemali eqoqiwe eliqoqwe ngamaphakathi… kufaka phakathi ukuhanjiswa nokudluliselwa ngomlomo. Ukuqonda ukuthi mangaki amakhasimende, kanye nenani lalawo makhasimende, kubalulekile ekuhleleni unyaka ozayo. Ezinye izangoma zingaletha ukubalwa okuncane… kepha amadili amakhulu kakhulu.
Ukugcinwa Kwekhasimende nge-Medium - lokhu kungathatha umzamo owengeziwe, kepha qonda ukuthi inkampani yakho yenzani ethinta ukugcinwa kwamakhasimende akho. Izikhathi eziningi izinhlelo zemfundo nokubonisana kuthathwa njengezindleko. Bona inani lezinsizakalo ozihlinzekayo ngaphandle kwenkokhiso… ungabona izinzuzo eziningi lapha!
Ukuqhathaniswa konyaka - enze kanjani amasu akho wokumaketha uma kuqhathaniswa nonyaka odlule? Ungabheja ngokuphelele ukuthi kuzoshintsha futhi ngonyaka ozayo! Ukushintsha ukuxuba kwakho kwemidiya, izinsiza kanye namasu kuzokhuphula imbuyiselo yakho yokumaketha kutshalomali.
Ungakubeki eceleni ukubuyekezwa kokuphela konyaka kokumaketha. Izinkampani eziningi zisebenzisa imali ukumaketha lapho zinezinsizakusebenza khona ukucabanga imali engenayo ivela, noma lapho imane nje ikhululekile kakhulu. Ukwenza ukubuyekezwa kokuphela konyaka kuzokunikeza amathuluzi owadingayo ukuze uhlasele ngonyaka ozayo ngecebo elisha, lokuwina!
Tags: Ama-Analyticsyonyakaimibiko yonyakaukuphela konyakaimibuzo yezokumakethaukubuyekeza ukumakethaunyaka omushaunyaka nonyakaukubuyekezwa kokuphela konyaka
Izitifiketi Eziyisithupha Zokusebenziseka Kwezokuxhumana Komphakathi
Yini Oyitholile Kuzinjini Zokucinga?